မုန်တိုင်း ၃ လုံး အပြိုင်ဖြစ်လာမည်လော? | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
One Response to “မုန်တိုင်း ၃ လုံး အပြိုင်ဖြစ်လာမည်လော?”
လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NIDA သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မနက်ဖန်န့နက်ပိုင်းတွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ဆက်လက်၍ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် နံနက်(တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်) တွင် အဆင့်-၃ တိုင်းဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီး လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၉၅ ကီလိုမီတာနှုန်း(တစ်နာရီ-မိုင် ၁၂ဝ) အထိတိုက်ခိုက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းအရွယ်အစားမှာ အချင်း ၄၂၅ ကီလိုမီတာ (၂၆၄ မိုင်) ရှိနေပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာမည့် 27W မှာ NIDA ၏လမ်းကြောင်းသို့ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပြီး လမ်းကြောင်းချင်းဆုံမည့်အချိန်တွင် NIDA ၏ အပြင်လေစီးကြောင်းကြောင့် အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားနိုင်မည်ဟု JTWC မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
In the extended Taus, TD 27w will continue to accelerate poleward and should reachapeak intensity of 40-45 knots. Model guidance supports the qs track with several models supporting weak interaction and merger; TD 27w is likely to dissipate as it tracks into the outer periphery of ts 26w.
စင်္ကာပူအရှေ့ပင်လယ်မှလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင် »